शरीरमा अ स्थिपञ्जर मात्रै बाँकी रहने यो अवस्थामा कसरी पुगिन् कुनै समयकी सुन्दरी मोडल निशा घिमिरे ? – Classic Khabar
June 11, 2021 529
विभिन्न म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी निशा घिमिरे अहिले जीवन मर णको दोसाँधमा छिन् । उच्च शिक्षा अध्ययनको क्रममा भारत भएको वेला सवारी दुर्घ टनामा परेकी निशाको उपचारमा अहिले आर्थिक समस्या परेको परिवारका सदस्यले जनाएका छन् । कलाकारसंघका उपाध्यक्ष रेजिना उप्रेतीले निशाको बिरामी अवस्थाको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै लेखेकी छिन् ‘नेपाली कला क्षेत्रमा जम्दै गरेकी एउटा नाम निशा घिमिरेको यो अवस्था देख्दा निःशब्द छु ।’राजधानि दैनिकमा खबर छ । साथै उनले आर्थिक सहयोगका लागि आग्रह पनि गरेकी छिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस,शिलान्यास गरिएको वर्षौँ बितिसक्दासमेत बनेन मोटर पुल – जिल्लाका एक नगरपालिका तथा दुई गाउँपालिकासहित छिमेकी जिल्ला बझाङ जोड्ने उद्देश्यका साथ सेती नदीमाथि निर्माण गर्न लागिएको मोटर पुल शिलान्यास गरिएको वर्षौँ बितिसक्दासमेत निर्माण सम्पन्न भएको छैन । पुलका पिलरसमेत निर्माण नगरिएको भन्दै यहाँका नागरिक पुल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी पुष्प–राजेन्द्र जेभी निर्माण सेवासँग आक्रोशित बन्न थालेका छन् ।
पुल निर्माणको जिम्मा पाएको उक्त कम्पनीको लपरवाहीका कारण पुल समयमै बन्न नसकेको यहाँका नागरिकको आरोप छ । पुल निर्माणका विषयमा यहाँका सञ्चारकर्मीले पटक–पटक समाचार सम्प्रेषण गरे पनि सम्बन्धित निकायले कुनै वास्ता नगरेको आदर्श गाउँपालिकाका स्थानीयवासी तथा सञ्चारकर्मी तेजु ओलीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुल निर्माण नभएको विषयमा जिल्लाका सञ्चारकर्मीले कयौँ पटक समाचार लेख्यौँ तर सम्बन्धित निकायले कुनै वास्ता गरेन, अझै केही वर्ष पुल बन्ने सम्भावना देखिँदैन ।”
तोकिएको समयमा पुल निर्माण नहुँदा जिल्लाको शिखर नगरपालिका र आदर्श गाउँपालिकाका स्थानीयवासीलाई निकै सास्ती भएको छ । पुल निर्माण चाँडो गर्न पहलका लागि यहाँका नागरिकले पटक–पटक सबै निकायमा खबर गर्दासमेत कुनै वास्ता नगरिएको बताइएको छ । वर्षौँदेखि पुल अभावमा यहाँका स्थानीयवासीले निकै समस्या भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
Prevके सबिता भण्डारी डिप्रेसन कै शिकार भएकी थिईन ? सवितालाई के भएको थियो? डाक्टर र परिवारको मिलेमतो थियो त ? (भिडियो सहित )
Nextआफ्नो नाम नभएपछि उपाध्यक्षले फुटाइदिइन् पुलको शिलालेख, मार्करले लेखिन् आफ्नो नाम
ससुराले बुहारीको संबेदनशिल अङ्गमा छोएको र नराम्रा हर्कत गरेको भिडियो एकाएक बाहिरियो